FAALADDA WARKA: Khudbadda Muuse Biixi ee Dagaalka Tukaraq– Xaqiiq mise Been Qayaxan? – Puntlandtimes
Muuse Biixi ayaa hadalkiisa ku bilaabay
Horta wax jileec LA yidhaahdaa ma jiraane siyaasad baa LA ciyaarayaa.
Dadka qaar baa yidhaahda muuse wuu SOO dabcay ka dib markii LA xanuujiyey taasi waa been waayo dagaalkii SOMALILAND baa raysay sababta UU hadalka UU dabcinayaana waayo waa nin dagaalku wuxu yahay oog mida kale dadka reer garowe ee beenta loogu sheegay in Isaaq weerar Ku SOO qaaday OO wuxuush damacasan inay garowe qabsadaan oo dadkeedana laayaan ayuu maskaxda iyo qalbiga u dejinayaa.
SOMALILAND dulmi uma socoto iyo guru aanay lahayn inay qabsato ee is dejiya reer garoowow uun buu hadalkiisu yahay.
Puntland waa qayb ka mid ah Somalia. Ciidanka Puntland was ciidan KA mid ah kuwa Somalia waayo wax Soomaaliya gooni loo yidhaahdaa ma jiro. Soomaaliya waxay ka koobantahay dawlad-goboleeedyo iyo gobolka banaadir.
Wadarta dawlad -goboleedyadan ayaa la isku yidhaahdaa Soomaaliyee ma jirto dawlad gooni ah oo oomaaliya la yiidhaahdaa.
Puntland waxay ka tirsantahay maamul-goboleedyadan Somalia sidaas awgeed, ciidankooduna waa ciidan Soomaaliya ah.
Tusaale, hadii gobol KA mid ah France UU xuduuda Ku qabsado England, dawlada Ingiriisku ma waxay LA dagaalsantahay dawlada Faransiiska mise gobol faransiika mid ah?
Jawaabtu waa labada dawladood ee France iyo England baa dagaalamaya waayo gobolka weerarka ahi wuxuu ka tirsan yahay France oo hoos yimaadaa. Sidan oo kale weeye xaalku markaa ay timaado arinta Somalia iyo SOMALILAND.
Mida kale, Waxaan ognahay in madaxweyne Ku xigeenka Puntland uu afkiisa ka sheegay in ciidamo badan oo laga keenay caabudwaaq iyo jubaland AY ugu badan yihiin waxa meesha ka dagaalamaya.
Waxay kale oo aan ognahay in dawlada fadaraalku ay Puntland Ku taageerto taageerada ciidamada, tobabarkooda (turkigaa tobara), iyo daaweynta dhaawacooda oo loo qaado Turkey iyo Muqdisho.
Ku darsoo dhamaan dawlad goboleedyadu WAXAY shir- jaraa’is oo ay qabteen toos ula safteen Puntland halkii ay labada dhinac ka dhex-dhexaadin lahaayeen.
Markaa, waa doqoniimo ninka aan garan inuu dagaalku yahay Somalia iyo SOMALILAND.
Taas macnaheedu maaha in dhamaan beelaha koonfurta Soomaaliya duulaan ka soo qaadeen Soomaaliland laakiin qeybo badan oo ka mid ah ah khaasatan beesha madexweynaha ee mareexaan iyo Daaroodka kale ayaa ku jira.
muuse haceebayn wana haka sheegin dawlada dhexe kuumana iman dawaladu buntlan okeliya baad soowerartay oo jawaabku siisay cidkale hawgudbin weligaa dhiig muslin baa daadisaa